विवाह भएको ७ बर्षपछि बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णयले पार्ने प्रभाव ! « Media for all across the globe
Long Haul at the LAC: War-Like Build up in Ladakh With No De-Escalation in Sight
अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्रीले भनिन्- मेरो ठूलो भूल भयो !
विवाह भएको ७ बर्षपछि बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णयले पार्ने प्रभाव !
विवाह भएको ७ बर्ष पछि मात्र बैवाहिक अंगिकृत नागरीकता दिने निर्णयले पार्ने प्रभाव, विवाह भएको एक बर्षमा बच्चा जन्मिन्छ, जन्मदर्ता कसरी गर्ने ? त्यतिमात्र होइन विवाह भएर आएकी महिलाले लोकसेवा आयोगको जाँच दिनु प¥यो दिन पाउने की नपाउने ?
विदेशमा रहेको श्रीमानसँगै वस्न नेपाली राहदानी वनाउनु परे के हुन्छ ? सातवर्ष अगावै श्रीमानको देहान्त भयो, के हुन्छ ? उसले अंश पाउन र नाता प्रमाणित गरी नागरीकता लिन फलामको चिउरा चवाउनु सरह हुन्छ । मलाई नेकपाको निर्णयले चिन्ता भएको छैन, वरु हाम्रो सामुहिक मौनता माथि चिन्ता छ । जवकी यो निर्णयले यो प्रदेशका विरलै नागरीक होला जो प्रभावित हुदैन ।
सीमा वारीपारीको साँस्कृति समबन्ध यो कानून बनेसँगै अन्तय हुने छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई यी प्रशनहरु गरौँ । यसकारण आवेगमा होइन, गम्भीरतापूर्वक सोचौँ । अन्तिरम संविधानको व्यवस्था र कायम रहेको कानून नै ठीक छ । यसैलाई कायम गरौँ ।
संविधानले यति बर्ष उत्ति बर्ष कुरनु पर्ने कतै उल्लेख गरेको छैन यसकारण मनोगत हिसावले नराखौँ । भोली तँपाइका छोराहरुले नी अमेरीकन र युरोपयीन विवाह गरेको खण्डमा झेल्ने समस्या यही हो ।
समर शेष है,नहीं पाप का भागी केवल व्याध